भारतको रक्षाका लागि नेपालीले ब, लिदान दिदा श्रीमतीको सिन्दूर मे, टिन्छ,बुबा आमाको काख रि, त्तिन्छ ?? – Dainik Sangalo
भारतको रक्षाका लागि नेपालीले ब, लिदान दिदा श्रीमतीको सिन्दूर मे, टिन्छ,बुबा आमाको काख रि, त्तिन्छ ??
November 28, 2020 733
भारतको सिमा रक्षाका लागि फेरी एक नेपालीले ज्या’ न गु’ मा, एका छन् । भारतीय सेनामा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरुलाई सिमाना रक्षाका लागि भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतीय सेनामा कार्यरत दाङ तुलसीपुरका एक नेपाली युवाको नि, धन भएको छ । उनी लामो समय देखि भारतीय सेनामा कार्यरत थिए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं। ९ बेलुवाका ३० वर्षीय प्रेम केसीको निधन भएको हो । भारतीय सेनाले उनलाई सिमानामा गो x ‘ ली ला’ गेको जानकारी दिएका थिए । सेनावाट औपाचारी रुपमा नि, धन भएको जानकारी भने दिएको छैन । सेनामै रहेका अन्य नेपालीले भने उनको नि, धन भइसकेको बताएका थिए ।
जम्मु कास्मिरमा कार्यरत केसीको समूहमाथि शुक्रबार बिहान ५ बजेतिर आx ‘क्र’ मण भएको भारतीय सेनाले परिवारलाई जानकारी गराएको छ । उनलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा नि, धन भएको बताइएको छ । ****यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला****
उक्त घटनामा घाईते भारतीय सेनाका नायक प्रेम बहादुर खत्री र राइफल मैन सुखबीर सिंहलाई उपचारकालागी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । यी दुवै भारतीय जवानहरुको उपचारकै क्रममा नि, धन भएको थियो ।
सीमा मा खटिएका भारतीय सेनाका जवानहरुले पाकिस्तानीहरुको ह , x म’ला’को ज’वा’फि का, ’र’र्वा’ही दिने क्रममा यीत दुई भारतीय सेनाको नि, धन भएको हो । प्रेम बहादुर खत्री र सुखबीर सिंह यी दुवै भारतका वीर सपूत भएको बताईएको छ । देशको रक्षा गर्दै गर्दा उनीहरुले दिएको बलिदान खेर नजाने बताईएको छ । यस कुराकोलागी देशबासी सधैं नै ऋणी रहने बताईएको छ ।
भारतीय सेनामा कार्यरत कुनैपनि नेपाली ज्या, न ग, एपनि उनीहरुको श, व नेपाल ल्याउन भने दिइदैन । परिवारलाई उतै वोलाएर उनीहरुको अन्तेष्टि गर्ने गरिएको छ । नेपालीहरुले परिवारका सदस्यलाई नेपाल ल्याउन पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
नि, धन हुने भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको श, ’व नेपालमा ल्याउन दिइनुपर्ने माग भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले गरेका छन्। हाल भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाहरूको नि, धन भए उनीहरूको श, व भारतमै अ, न्त्येष्टि गरिदिने चलन रहेको छ।
तर कतिपय मृ ’तक सैनिकका परिवारले नेपालमै ल्याएर आफ्नै संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गर्न चाहने गरेका छन्। भारतले भने माx ’रि, ’ने’हरूलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्ने भन्दै नेपालबाट मृ, तकका परिवारलाई बोलाएर अन्त्येष्टि गरिदिने गरेको छ। मा x ’रि’ नेहरूको अन्त्येष्टिमा भारतीय सेनाले त्यहाँको राष्ट्रिय झण्डा ओडाउनुका साथै सलामी दिने गरेको भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकका परिवारले श, व नेपाल ल्याउन चाहे भने चाहिँ सहज छैन।
तर कतिपयले निकै जोडबल गरेर श, व नेपाल नै ल्याएको उदाहरण रहेको संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवम् प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालका महासचिव कुलबहादुर केसी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सबैभन्दा ठूलो पी’डा परिवारलाई हुन्छ र उसको परिवारले अन्तिम संस्कार गर्न नपाउनु भनेको निकै दु:खदायी कुरा हो।”
केसी भन्छन्: “ती कार्य गर्दा नेपाली भूमिमा विरोध हुनसक्छ, त्यसैले नेपाल सरकारले अनुमति दिए हामी श, व नेपालमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिदिन्छौँ भन्ने खालको कुरा भारत सरकारबाट आएको छ।”
गत बुधवार जम्मू-कश्मीरमा खटिएका भारतीय सेनामा कार्यरत गोरखाका २५ वर्षीय अर्जुन थापामगरको दो, होरो भि, ड, न्तमा नि, धन भएपछि भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले माग दोहोर्‍याएका हुन्। ****यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला****
Prevरुकुममा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना, ४ को मृत्यु
Nextमन परेको युवकसँग विवाह गर्न जिद्दी गर्दै युवती चढिन् होर्डिङ बोर्डमा (भिडियो)
नेपालमा अस्पतालको फार्मेसीबाट मात्र कोरोना संक्रमितको उपचारमा अब यो औषधि बेच्न पाइने
प्रहरीले नै गरे १५ वर्षीया किशोरीलाई सोच्नै नसकिने ‘ह, र्कत’
काठमाडौंमा एकै परिवारको १८ जना बच्चाहरु भोकै